Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguKen
Indlwana yethu eyonwabileyo ezimeleyo yeendwendwe ikufuphi neendawo zokutyela, iivenkile kunye nolwandle kunye neembono ezintle zepaki yeSizwe ngasemva kwethu kunye nobomi basendle obuhlayo. Sihamba ngomzuzu o-1 ukuya kwiindawo zokutyela ezi-3 kunye nevenkile ngokubanzi imizuzu emi-2 ukuya elunxwemeni kunye Ukuhamba ngemizuzu emi-5 ukuya kwihotele yaseArcadia, iibhasi ezidlula emnyango wethu.
Nceda uqaphele zonke iindwendwe kufuneka zinikeze ubungqina bokugonywa kabini kwe-COVID.
I-cottage inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nomatshini wokuhlamba. Asikuvumeli ukutshaya kwindlwana kodwa kukho indawo eyabelwe ukutshayela. Kukho indoda emi-2 yee-kayak iindwendwe zamkelwe ukuba ziyisebenzise singavuya kakhulu ukuba siyithuthele elunxwemeni. I-cottage ihlukaniswe kwindlu enkulu yintendelezo eyenza ibe ngasese.
4.95 · Izimvo eziyi-248
I-Arcadia Bay imi embindini weebheyi kwaye ineelwandle ezi-2 ezithandekayo ezikhuselekileyo-zombini zineeBBQ zasimahla elunxwemeni into nje yesidlo sangokuhlwa.
Ukuba kuyimfuneko siya kukuvuyela ukukuhambisa kwivenkile enkulu ngayo nayiphi na imfuneko egcina ukuba kufuneka uyiphathe. Kwakhona singenza amalungiselelo okukuthutha ukusuka kwisikhululo senqanawa xa ufika ukuya kutsho ngo-7.15 pm - iibhasi zihamba ukusuka kwisikhululo ukuya kumnyango wethu wangaphambili.
Ukuba kuyimfuneko siya kukuvuyela ukukuhambisa kwivenkile enkulu ngayo nayiphi na imfuneko egcina ukuba kufuneka uyiphathe. Kwakhona singenza amalungiselelo okukuthutha ukusuka kwi…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Arcadia